Thwebula Paltalk 1.11.60.2439 – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Paltalk
I-Paltalk – isofthiwe yokuxhumana nabantu emhlabeni jikelele. Isofthiwe inika amandla ukushintshanisa imiyalezo, yenza amakholi wezwi nevidiyo, uthumele amafayela, njll. Paltalk ikuvumela ukuthi udale ikamelo lokuthumela imiyalezo noma uxhume emakamelweni adalwe ahlukaniswe yizigaba. Isofthiwe iqukethe umthamo owenza ukuthi usebenzise ukusekelwa kwe-intanethi ngewashi. Futhi i-Paltalk ikuvumela ukuthi uxoxe nabangani kusukela ku-intanethi ye-social networking site Facebook.
Ukushintshaniswa kwemilayezo namafayela
Ikhono lokwenza amakholi wezwi nevidiyo
Phindela ukusekelwa kwewashi ku-intanethi
Amazwana ku Paltalk
Paltalk software ehlobene
Le software iklanyelwe ukuxhumana kwezwi nokubhala ngeqoqo lezici ezikhethekile ezihlose ukuthuthukisa ukuxhumana phakathi nenqubo yomdlalo.
MyChat 6.8 Client, Server futhi Portable
Ithuluzi for umbhalo, izwi kanye video imiyalezo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wabelane amafayela bese wengeza abasebenzisi oxhumana nabo kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza.
Proxifier 3.31 Standard futhi Portable
Ithuluzi unika isofthiwe inethiwekhi ikhono ukusebenza ngokusebenzisa seseva uma engekho yayo. Futhi isofthiwe Bypasses nemikhawulo firewall kanye kwenza ukufihla-ikheli le-IP.
Fotosizer 3.07.0.565 Standard...
Isofthiwe for the zlib batch kanye nokuguqulwa amafayela image. Isofthiwe kwenza ukuba ulungise izinga image, size nezinye izinketho ngesikhathi ukuguquka amafayela.